March 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Mar 31, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 08-08-1441 …
Al-Shabaab oo Bu’aale Ku Dilay 6 Jaasuus oo U Shaqeynayay Dowlado Kala Duwan.
cusmaan	 Mar 31, 2020 0
Magaalada Bu’aale ee wilaayada Jubbooyinka waxaa maanta ka dhacay xukun Xaddu-riddo ah oo lagu fuliyay 6 xubnood oo Basaasiin ahaa. Dhammaantood waxay ahaayeen shaqaale hoosaadyo ka tirsan sirdoonada shisheeyaha iyo DF…
Axmad	 Mar 30, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 07-08-1441 …
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Isniin, taariikhda hijriguna waxay ku…
Shukran Hogaanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab!(MAQAAL)
Internetku waa shabakad ballaaran oo ay ku jiraan mareego tiro aan lagu koobi Karin, dadka isticmaalana waa dad kala duwan, haseyeeshee mid weliba wuxuu ka raadsadaa hadafkiisa iyo baahida markaas heysa. Inta badan marka aan Internetka…
Axmad	 Mar 29, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Axad, taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Axmad	 Mar 28, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 05-08-1441 …
Maraykanka Oo dad Shacab ah ku dilay duleedka Buula Fullaay.
Diyaaradaha Maraykanka ayaa gobolka Baay qeybo kamid ah waxay ku dileen dad shacab ah, kadib gantaal ay la beegsadeen. Duqeynta oo ka dhacday duleedka deegaanka Buula Fullaay ee gobolka Baay ayaa waxaa ku dhintay labo qof oo shacab ah,…
Askar lagu dilay Baydhabo iyo Bariire.
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ku waramaya in qarax xoogan lala eegtay ciidamo katirsan kuwa maamulka Koonfur galbeed ee uu hogaamiyo Lafta gareen. Qaraxa ayaa ka dhacay Maanya fuulka Baydhabo,…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa sabti, taariikhda hijriguna waxay ku beegan…